Real Madrid oo doonaysa inay suuqa Janaayo kooxda Barcelona ku garaacdo saxiixa Fabian Ruiz – Gool FM
(Madrid) 14 Okt 2019. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa doonaysa inay suuqa bisha Janaayo ee horraanta sanadka cusub dhiggeeda Barcelona ku garaacdo saxiixa Fabian Ruiz.
Jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain ayaa warinaya in Real Madrid ay jeceshay inay la soo saxiixato laacibka khadka dhexe ee Kooxda Napoli, Fabian Ruiz.
Bogga hore ee Marca ayaa lagu daabacay in Real Madrid ay rabto inay kooxda ay ku xafiiltamaan Spain ee Barcelona ay ku garaacdo laacibkan Fabian Ruiz.
Xiddiga xulka qaranka Spain ayaa ah mid sii kordhinaya bandhiggiisa ciyaareed, iyadoo la mahadinayo qaab ciyaareedyo muuqda oo ku soo bandhigay horyaalka Serie A iyo sidoo kale xulka Spain ee da’doodu ka hooseyso 21-jirrada oo uu kula guuleystay sanadkan Euro U21.
Real Madrid ma doonayso inay waqti lumiso, waxaana ay isku dayi doonaan sidii ay Barcelona ugu garaaci lahayd saxiixa Fabian Ruiz bisha Janaayo marka dib loo furo suuqa kala iibsiga xiddigaha.